ခရစ်တော်၌လူသစ် – Shwe Canaan
GOD AND CREATION မရပ်မနား လည်ပတ်နေသည့် နာရီတစ်လုံးကို ကြည့်ရှုဆင်ခြင်သည့်အခါ အချိန်မှန်မှန် သွားနေ၏။ ထိုနာရီသည် မိမိအလိုအလျောက် ဖြစ်လာပြီးလည်ပတ်သွားနေခြင်း မဟုတ်ဘဲ ထုတ်လုပ်သူရှိ၍သာ ဖြစ်လာပြီး လည်ပတ်သွားလာနေကြောင်း သဘောပေါက်နိုင်ပါသည်။ လောကပေါ်တွင် မြင်တွေ့နေရသော လေယာဉ်ပျံ၊ မော်တော်ကား၊ မီးရထား၊ သင်္ဘောအစရှိသည်တို့ သည်လည်း ထုတ်လုပ်သူ၊ […]
WHO IS GOD? “ဘုရားသခင်ကို အဘယ်သူမျှမမြင်စဖူး …” ဟု ဖော်ပြထားသည် ဖြစ်ရာဘုရားသခင်အကြောင်း သိလို၍ ဘုရားသခင်သည် အဘယ်သူနည်းဟု မေးမြန်းလာသူအားလူဥာဏ်ကို အားကိုး၍ အဖြေပေးရန် အလွန်ခက်ခဲလှပါသည်။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာ၌ ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း တိတိကျကျ ဖော်ပြအဖြေ ပေးထားသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။(က) ဘုရားသခင်သည် […]
TO KNOW EXISTENCE OF GOD လူသားများအနေဖြင့် ဘုရာသခင်ရှိကြောင်းကို ဖော်ပြရန် အထူးခက်ခဲလှပါသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်က နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ကိုယ်တော်ရှိတော်မူကြောင်းကို ဖော်ပြလျက်ရှိနေ ပါသည်။ ဘုရားသခင်အမှန်တကယ်ရှိကြောင်း အောက်ပါအချက်အလက်များအားဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။ ၁။ ဖန်ဆင်းထားသောအရာများအားဖြင့် သိနိုင်ခြင်း (WE […]
WHO IS JESUS CHRIST? သခင်ခရစ်တော်သည် လူသားများအား အပြစ်နွံတွင်းမှ ကယ်တင်ခြင်းတည်းဟူသော မဟာအမှုတော် မြတ်ကြီးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အပျိုကညာစစ်ဖြစ်သူ “မာရိ”၏ ဝမ်း၌သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် အားဖြင့် ပဋိသန္ဓေယူပြီး ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံကာ လူ့ဖြစ်အင်ဖြင့် လောကသို့ကြွဆင်းလာခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ ခမည်းတော် ဘုရားသခင်၏ တစ်ပါးတည်းသောသား အနေနှင့် […]
WHO IS SATAN စာတန်မာရ်နတ်သည် ကောင်းကင်မှ လျှပ်စစ်ကဲ့သို့ ကျဆင်းလာသူ ဖြစ်ကြောင်း ယေရှုကိုယ်တိုင် ဖော် ပြထာါးသည်ကို တွေ့ရပါသည် (လု၊၁၀း၁၉)။ စာတန်မာရ်နတ်သည် ကမ္ဘာဦးအစ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ ဧဒင်ဥယျာဉ်၌ နေစဉ်ပင်လျှင် ရှိခဲ့ပါပြီ။ ပထမလူဖြစ်သူ အာဒံနှင့်ဧဝတို့ထံ မြွေအသွငိဖြင့် လာပြီး […]
(THE FALL OF MAN) လူကို ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မိမိအလိုတော်အတိုင်း လိုက်လျှောက်အသက် ရှင်ပြီး မိမိနှင့် အမြဲတမ်း မိတ်သဟာယဖွဲ့နေရန် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပထမဦးဆုံး လူသားများဖြစ်ကြသည့် အာဒံနှင့် ဧဝတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ရန်သူစာတန်၏ သွေးဆောင်ရာနောက်သို့ လိုက်ပါကြပြီး […]
(OLD LIFE) ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ လူဟောင်းဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းအခြေအမြစ်ကျကျ နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ အခြေခံကျတဲ့ အခက်တွေကို ဖော်ပြပါမယ်။ (က) မိခင်က မွေးသောသူ – လူဟောင်းဘဝဟာ မိခင်ဝမ်းမှာ သန္ဓေတည်စပြုချိန်က စလာပါတယ်။ ပိုပြီး တိတိကျကျ ပြောရရင် တော့ […]
NEW LIFE လူဟောင်းအကြောင်း သဘောပေါက်ပြီးရင် လူသစ်အကြောင်းကိုလည်း သေချာသဘောပေါက်ဖို့လို ပါလိမ့်မည်။ လူသစ်ဆိုတာ… (က) ဘုရားသခင် ဖွားစေသောသူ လူဟောင်းဟာ လူသားမိဘများကမွေးဖွားပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီး လူသစ်ကတော့ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော် တိုင်က ဖွားစေတော်မူရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသား(BORN OF GOD) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် […]
HOW TO CHANGE? လူဟောင်းအကြောင်းနဲ့ လူသစ်အကြောင်း အခြေခံကျတဲ့ အချက်တစ်ချို့ကို လေ့လာပြီးတဲ့နောက်၊ လူဟောင်းဘဝကနေ လူသစ်ဘဝကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့အချက်ကို ဆက်ပြီးပြောပြချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ လူဟောင်းနဲ့လူသစ်ဟာ နည်းနည်းပါးပါးမဟုတ်ဘဲ လုံးဝကို ဆန့်ကျင်ကွာခြားလှပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ ဇာတိပကတိမွေးသောအရာသည် ဇာတိ ပကတိဖြစ်၏။ ဝိညာဉ်တော်မွေးသောအရာသည် ဝိညာဉ်ဖြစ်၏။ ငါတို့သည် […]
ABOUT THE NEW LIFE ပြောင်းလဲသူဟာ ခရစ်တော်နဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်အောင် ဘုရားတန်ခိုးတော်က လုပ်ဆောင်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတန်ခိုး တော်နဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း အကျိုးရလဒ်ကို ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ ဝန်ခံပြီး ခံစားရရှိကြောင် ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဘယ်တော့မှ မပြောင်းလဲ၊ မပျောက်ပျက်နိုင်မယ့် ထာဝစဉ် […]
NEW LIFE AND THE HOLY SPIRIT စစ်မှန်တဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းဟာ လူ့အသိတရားအားဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြိုးစားပြုပြင်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ ပြုပြင်ခြင်း (အသစ်ဖြစ်စေခြင်း)သာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက် အသက်တာပြောင်းလဲဖို့အတွက် နှုတ်ကပတ်တော် သမ္မာတရားကို တိတိကျကျ ကြားနာရဖို့ လိုပါတယ်။ […]